အခြားသော 1xBet ငွေသွင်း ဘောနပ်စ်များ ( Other 1xBet Deposit Bonuses ) - Myanmar Sports
လူကြီးမင်းတို့ကို သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီကနေ နေ့စဥ်ဘောနပ်စ် ( daily
bonuses ) တွေနဲ့ ( Promotions ) ပရိုမိုးရှင်းပေါင်း မြောက်များစွာ‌တို့ကို ကမ်းလှမ်းထားတာရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒီကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေနဲ့ ပရိုမိုး‌ရှင်း ( 1xBet Promotions ) တွေက လူကြီးမင်းတို့ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်လာမှာ ဖြစ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေနဲ့ ပရိုမိုး‌ရှင်း‌တွေကို လူကြီးမင်းတို့ မသိလိုက်ရမရှိလေအောင် ဒီစာမျက်နှာကို အစအဆုံး ဖတ်ရှု
ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ 1xBet မှာ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေဖို့ နေ့တိုင်းလိုလို ကမ်းလှမ်း
ထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေ ရှိပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet က ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ဘောနပ်စ်နဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေထဲက လူကြိုက်အများ
ဆုံး ဘောနပ်စ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘောနပ်စ်တွေ၊ ပရိုမိုးရှင်းတွေအပြင် နောက်ထပ် ဘောနပ်စ်တွေ အများကြီ ရှိပါသေးတယ်။
ဘောနပ်စ်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ အရင်ဆုံးငွေသွင်းဘောနပ်စ်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၁။ ငွေသွင်းဘောနပ်စ်ဆိုတာဘာလဲ? ( What are Deposit Bonuses? )
အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် ငွေသွင်းဘောနပ်စ်ဆိုတာကတော့ အကောင့်ထဲကို ငွေသွင်းတာနဲ့ သွင်းတဲ့ပမာဏအတိုင်း ပြန်ရတဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ဘောနပ်စ်ပဲ ( 100% deposit bonus ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် အကောင့်ထဲကို ငွေသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေသွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး အကောင့်ဖွင့် ရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရှိပြီးအကောင့်ကို 1xBet ဝဘ်ဆိုက်မှာ လောဂ်အင်ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေသွင်းဘောနပ်စ် ( first deposit bonus ) ရရှိဖို့အတွက် ငွေသွင်းတဲ့အခါ ဘောနပ်စ်အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ အားကစားအတွက် ဘောနပ်စ် ( deposit bonus for sports ) နဲ့ ကာစီနိုအတွက် ဘောနပ်စ် ( deposit bonus for casino ) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၂။ ဘောနပ်စ်ရရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ( How to Get Deposit Bonuses? )
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ( Terms and Conditions )
၁။ ပထမဦးစွာ 1xBet ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ မှတ်ပုံတင်ပါ ( အကောင့် ဖွင့်ပါ ) ( 1xbet open account ) သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား အကောင့်ကို လော့ဂ်အင်ဝင် ( Log in ) ပါ။
၂။ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ဘောနပ်စ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၃။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့် (အကောင့် ဆက်တင်များ — ဘောနပ်စ် ကမ်းလှမ်းချက်များ၌ ပါဝင်ခြင်း) တွင် ပါဝင်ရန် ရွေးချယ်ရပါမည်။
My Account – (Account Setting – Participation in bonus offers – bonus for sport ) ဒါမှမဟုတ် bonus for casino ကို
၄။ ဘောနပ်စ် ရရှိရန်အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
(အကောင့်တစ်ကောင့်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ မိသားစုတစ်စုလျှင် တစ်ကြိမ်၊ IP လိပ်စာတစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ်၊နှင့် PC တစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ်) သာ ရရှိနိုင်
အကောင့်များစွာကို မှတ်ပုံတင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပါက ထို့ကဲ့သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်အကောင့်များအားလုံးတွင် ထည့်သွင်းထား
သော ဘောနပ်စ် ( 1xbet bonus ) များကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ လောင်းထားသောပွဲအားလုံး ဘောနပ်စ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီ ရလဒ်အတည် ( Settle ) ဖြစ်ရပါမည်။
၆။ ဘောနပ်စ်နောက်ဆုံးလက်ကျန်ငွေသည် အနည်းဆုံးလောင်းကြေးပမာဏ (၁၅၀ ကျပ်) အောက် မနည်းရပါ။
၇။ ဘောနပ်စ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် ( Unsettle bet ) များ ကျန်နေပါက ဘောနပ်စ်ရမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ အားကစားအတွက် ငွေသွင်းဘောနပ်စ် ( DEPOSIT BONUS FOR SPORTS )
ဒီဘောနပ်စ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet မှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေသွင်းရင် သွင်းတဲ့ ငွေပမာဏအတိုင်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ပြန်ရတဲ့ ဘောနပ်စ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒီဘောနပ်စ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ 1xBet မှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေသွင်းတဲ့ ကစာသမား
ကစားသမားအသစ်တွေအနေနဲ့ ပထမဆုံးငွေသွင်းတဲ့အခါ အများဆုံး € 100 ( ယူရို ၁၀၀ ) အထိသွင်းပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ
ဘောနပ်စ်ကို ရဖို့အတွက် အရင်ဦးဆုံး Bonus For Sports ( အားကစားအတွက် ဘောနပ်စ် ) ကို ရွေးချယ်ထားရပါမည်။
ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကာစီနိုအတွက် ငွေသွင်း ဘောနပ်စ် ( DEPOSIT BONUS FOR CASINO )
ဒီဘောနပ်စ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ဘောနပ်စ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒီဘောနပ်စ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ 1xBet မှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေသွင်းတဲ့ ကစာသမားအသစ်တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားအသစ်တွေအနေနဲ့ ပထမဆုံးငွေသွင်းတဲ့အခါ အများဆုံး € 300 ( ယူရို ၃၀၀ ) အထိသွင်းပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘောနပ်စ်ကို ရဖို့အတွက် အရင်ဦးဆုံး Bonus For Casino ( ကာစီနိုအတွက် ဘောနပ်စ် ) ကို ရွေးချယ်ထားရပါမည်။
ကာစီနိုဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၅။ တနင်္လာနေ့ ဘောနပ်စ် ( MONDAY BONUS )
ဒီဘောနပ်စ်ကတော့ တနင်္လာနေ့မှာ ငွေသွင်းတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် 100% ဘောနပ်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က 1xGames တွေမှာ ကစားဖူးတဲ့ ကတ်စတန်မာတွေသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘောနပ်စ်ကို လိုချင်ရင် အနည်းဆုံး 1 € ( ၁ ယူရို ) ကနေ စပြီး ဘယ်ပမာဏကိုမဆို ငွေသွင်းရပါမည်။ အများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ ဘောနပ်စ်ပမာဏကတော့ € 100 ( ၁၀၀ ယူရို ) ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၆။ သောကြာနေ့ ဘောနပ်စ် ( LUCKY FRIDAY )
ဒီသောကြာနေ့ဘောနပ်စ်ကတော့ သောကြာနေ့မှာ ငွေသွင်းတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် 100% ဘောနပ်စ် ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာ ငွေ ၁ ယူရို (€ 1) ကနေ ၁၀၀ ယူရို (€ 100) အတွင်း ငွေသွင်းတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဘောနပ်စ်အကောင့် အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ဒီဘောနပ်စ်ကို နေ့စဥ် ငွေသွင်းငွေထုတ် လုပ်နေပြီး ပုံမှန်ကစားနေသူများသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောကြာနေ့ ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၇။ ‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘောနပ်စ် ( WEDNESDAY BONUS )
ဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘောနပ်စ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ငွေသွင်းတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် 100% ဘောနပ်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘောနပ်စ်ကို ရဖို့အတွက် အရင်တစ်ပတ် သောကြာနေ့မှာ သောကြာနေ့ အပိုဆု ဘောနပ်စ်မှာ ပါဝင်ပြီး ဘောနပ်စ်ကို အနိုင်ရရှိထားသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၈။ အရှုံးမရှိ အလောင်းအစား ( NO RISK BETS )
ဒီအရှုံးမရှိ အလောင်းအစား ဘောနပ်စ်ကကျတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ No Risk Bet ပရိုမိုးရှင်း စာမျက်နှာမှာ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ပွဲတွေကို လောင်းကြေးထည့် ကစားရမှာပါ။ တကယ်လို့ အလောင်းအစား ရှုံးခဲ့ရင် ( free bet ) အခမဲ့ အလောင်းအစား ကစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
အရှုံးမရှိ အလောင်းအစား ပရိုမိုးရှင်း အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၉။ ဆက်တိုက်လောင်းကြေးအရှုံးများအတွက် ဘောနပ်စ် ( BONUS FOR A SERIES OF LOSING BETS )
အလောင်းအစား ပွဲစဥ် ( ၂၀ ) ဆက်တိုက်ရှုံးတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် ဒီဘောနပ်စ်ကို ကမ်းလှမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး လောင်းကြေးပမာဏ ၂ ဒေါ်လာနဲ့ ညီမျှတဲ့ မြန်မာကျပ်နဲ့ ပေါက်ကြေး ၃ ထက်မကျော်တဲ့ အားကစားပွဲစဥ်တွေမှာ ရှုံးအောင်လောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်တိုက် လောင်းကြေး အရှုံးများအတွက် ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၁၀။ ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ် ( CASHBACK BONUS )
ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ် ( ကတ်ရှဘတ် ) ဆိုတာကတော့ ကစားသမားတွေ နေနဲ့ အကောင့်ထဲ Wave နဲ့ ငွေသွင်းတဲ့အခါ ကော်မရှင်ခ ပေးဆောင်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင်မို့ ကစားသမားတွေ မနစ်နာရအောင် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကနေ ကတ်ရှဘတ် ( ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ် ) အနေနဲ့ ပြန်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကတ်ရှဘတ် ဘောနပ်စ် ကတော့
10% Cashback Bonus ( ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ် ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ် ( 10% CASHBACK BONUS )
သွင်းငွေ ပမာဏရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ပေးငွေ ဘောနပ်စ်ကို ပရိုမိုကုတ် အနေနဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကတ်ရှဘတ် ပရိုမိုကုတ်ကို ရဖို့ဆိုရင် အကောင့်ထဲကို Bank Transfer၊ Kpay နဲ့ အနည်းဆုံး မြန်မာငွေ ၉၀၀၀ ကျပ်ကနေ စသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၁၀% ကတ်ရှဘတ် ဘောနပ်စ်အကြောင်းကို 👉 ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 👈
၁၁။ ကံကောင်းသောနေ့ ဘောနပ်စ် ( LUCKY DAY BONUS )
ဒီ ” Lucky Day ” ( ကံကောင်းသောနေ့ ) ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ပရိုမိုပွိုင့် ၅၀၀ ( 500 Promo Points ) အထိ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ပေါက်ကြေး အနည်းဆုံး ၁.၈ ရှိတဲ့ ဘယ်အားကစား ပွဲစဥ်ကိုမဆို လောင်းကြေး အနည်းဆုံး ၂၃၄၆ ကျပ် ( 2346 MMK ) ဖြင့် လောင်းကြေးတင် ကစားပြီး ကမ်းလှမ်းချက်မှာ ပါဝင်ခြင်းကို အတည်ပြုလိုက်ပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဘောနပ်စ်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ဘောနပ်စ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဘောနပ်စ်တွေ၊ ပရိုမိုးရှင်း ပြိုင်ပွဲတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ခင်ဗျ။
လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ငွေသွင်းဘောနပ်စ်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။